Yeyiphi eyona nguqulo ikhoyo ngoku yeDreamweaver? - Faq
Eyona > Faq > Iphupha lomluki we-cs2-indlela yokwenza
Iphupha lomluki we-cs2-indlela yokwenza
Yeyiphi eyona nguqulo ikhoyo ngoku yeDreamweaver?
Molo, ndinguMphathi weMveliso ye-alejandro eDreamweaver, ngaphezulu nje kweenyanga ezimbini emva kokuba sikhuphe i-Dreamweaver CC, sonwabile ukwazisa ngohlaziyo lwethu lokuqala ngezinto ezintsha ezinomdla kunye nokuphuculwa kwamava omsebenzisi.
Ngaphambili, i-Dreamweaver's View View ibingabonisi umxholo wewebhu ngokwaneleyo ukunika abasebenzisi ukuzithemba ukuba umxholo wabo ungabonakala ngokufanayo kwisikhangeli kwi-Live View evela kwi-Dreamweaver CC, ngoku eqhuba kwisakhelo seChromium esishumekileyo, kubandakanya i-CEF 3 ebizwa ngokuba yiDreamweaver ngoku ibonisa umxholo wewebhu ngokusebenza okufanayo kwetekhnoloji ye-HTML5 kunye nenkxaso yeCSS efumaneka kuGoogle Chrome. Masibone ukuba oku kunokuthetha ntoni kuba ubona iDreamweaver ngoku inikezela indawo yam kwindawo ebonakalayo ndinonxibelelwano apha kwaye ndingafuna ukubenza bahluke ngaphambili ukuba ndifuna ukuseta irediyitha yomda wabo kwisikhangeli ngoku ndinokuseta iipesenti kwaye ndibone umxholo onikezelwe ngokufanelekileyo Cofa kwinqanaba lokuDibanisa ngqo kwi-Dreamweaver kwaye uyabona ukuba ndinabakhethi ababini abasetyenzisiweyo kunxibelelwano oluvela kwimibuzo emibini eyahlukeneyo yemidiya. Masiqale sikhethe enye kumbuzo osezantsi wemithombo yeendaba kwaye siqhubeke kwaye sicime i-Edge Radius, ukwenza oko ndicofa ku-Set Properties kwaye uskrolele ezantsi apho ndibeke khona ngaphambili i-Edge Radius kunye neePixels Kulungile, ngoku sele ihambile, yiya phezulu kwaye ukhethe omnye umkhethi kwisicelo esikhulu semithombo yeendaba apha.
Ndiza kuhamba phambili ndicime zombini ububanzi kunye noseto lweradiyo yomda. Ngoku uyabona ukuba ububanzi baba bakhethiweyo bunciphile baba ngama-60px kuba yile nto bendikade ndiyiseta ngaphambili, into endiza kuyenza ngoku kukutshintsha oku kububanzi besiseko sepesenti. Makhe sibone ukuba ijongeka kanjani ngoku kwi-60%.
Uyazibona ukuba zinkulu kakhulu, ke ndingasebenzisa isitshixo seShift + ezantsi ukuthoba elo xabiso nge-10% zonke ngaxeshanye kwaye ziye kuma-40% ndicinga ukuba ijongeka intle ngoko ke ndiza kuyishiya apho njengoko setha ububanzi kwinto endifuna uku-odola ngayo ngesixhobo somda werediyasi nqakraza ikhonkco embindini kwaye utshintshe oku ukuya kwi-100% ukuze ndifumane isiphumo esihle setyhula. Ngoku ungabona ukuba ndibutshintsha ububanzi bescreen sam ezi linki zisabela ngokufanelekileyo kwaye zibukeka zintle njengoko ndiqhelene nale khowudi ndingafumana ngokulula aba bakhethiweyo kwaye ndiqonde indlela ezinxibelelana ngayo nezinto ezikwiskrini, kodwa kuthekani ukuba hlela ikhowudi yomnye umntu ukunceda abasebenzisi baqonde ubudlelwane phakathi kwezinto ezinikezelweyo ze-HTML kwimbonakalo ebonakalayo kunye nokusetyenziswa kwabakhethi beCSS kuyilo lweCSS esazisa ngalo ngoku? Gqamisa Masibone ukuba ukuqaqambisa okwenyani kunokuwunyusa njani umkhiqizo wam xa ndisebenza. Into yokuqala endiza kuyenza kukucofa kuHlola ukuze ubone inqanaba lomxholo wenqaku eliphucula ukubonakala kokubonakalayo kwaye iirula zongezwa kumboniso Oobhaka ukuze bahlole endaweni ukuba olona khetho luchanekileyo olusuka kwithegi yomfanekiso, yona kufanele ukuba icace le nto iyatshintsha.
Ukuba ithegi yomfanekiso inokuchaphazela yonke imifanekiso kwi-domso yakho, sidinga into ethile kuqala, into endizakuyenza kukuqaqambisa bukhoma. Kuvulwe ngokungagqibekanga, kodwa ndiza kuyicima ngeenjongo zalo mboniso. Ngoku sicofa kwakwibhegi efanayo ukukhubaza imo ye-Finspect kunye nemouse ukuya kwipaneli yokukhetha ye-CSSdesigner, ukujikeleza ngaphezulu kwethegi yomfanekiso, iya kubonisa imigca enamachaphaza angwevu Zonke ezi zinto zichaphazelekile kukhetho, ukuze ubone izinto ziya kukhethwa ngokwenyani, jonga ukuba umgca ophawulwe njani ubonakala, kwaye ungaqala ukuqonda ukuba ukuKhanya ngokuBukhoma kukunceda njani ukuba udale umxholo phakathi kwezinto kunye nabakhethiweyo, kodwa kuthekani ukuba ndinazo zonke iibhegi zobhedu Yonke imigca enamachaphaza ibonakala ngaphezulu koobhaka ngamnye kwaye xa ndicofa ngokukhuselekileyo ngokwaneleyo bayakhanyisa, ngoku ndingenza naluphi na utshintsho endilifunayo kwaye enyanisweni zonke ezi zinto ndingadibanisa into eyoyikekayo njengomtshato obomvu osebenza ngesithunzela se-redbox esifihlakeleyo, undivumele ndibonise ukongeza okulandelayo kwi-Dreamweaver I-CC kumyili weCSS Sebenzisa iphaneli yeePropathi ukuseta useto lwesithunzi sakho, kwaye ngoku lixesha lokukhetha umbala.
Uza kubona isitayile esifanayo sombala obandakanyiweyo kwezinye zeemveliso zeAdobe Edge. Oku ngoku kuzisa isikhethi sethu sombala kunye nezixhobo zethu ze-gradient Phuma xa ubuyela apho ubona isixhobo se-eyedropper esikuvumela ukuba ukhethe kwimibala kwi-Dreamweaver ukuze usampule kwimibala kwiprojekthi yakho, njengoko intle kakhulu mbi. Masikucime oko kwaye sibuyele kwinto ebesinayo ngaphambi kokuphuculwa komyili weCSS ezimbalwa endikuthandayo zongeza abakhethiweyo abatsha Ngoku ungongeza abakhethi abatsha kwinto ngokucofa kuyo nayiphi na into kwiscreen ukuze uyijolise kuyilo lweCSS kwaye ucofe uphawu lokudibanisa Iphaneli yokuKhetha ukongeza ngokuzenzekelayo isikhethi kumthombo ofanayo weCSS oyena mntu ukhetha okhethekileyo uvela ngoku ungabona ukuba kulula kangakanani ukongeza isikhethi kudityaniso lweLifu lokuDala kwasekuqaleni kwiDreamweaver CC ekwinqanaba lokuqala lokwazisa abanye abanamandla kakhulu Inqaku elinye lazo lokuvumelanisa useto ngoku lifumana uhlaziyo oluluncedo ukongeza kuseto lwendawo kunye nezinto onokukhetha kuzo unokuvumelanisa kwakhona iindlela ezimfutshane zekhibhodi kunye neendawo zokusebenzela ndinofakelo olutsha lwe-Dreamweaver CC apha andinakungqinelana kodwa konke kufuneka ngaba ucofa iqhosha lokuvumelanisa ucofe useto lokuvumelanisa ngoku ndiza kukhetha ukuvumelanisa kwilifu kuba kulapho kugcinwa khona useto lwam kwaye xa zigqityiwe ndicofa kwakhona ukufaka isicelo kunye ne-vo ila, iindawo endisebenza kuzo endizithandayo ziyavela ngoku kwaye zonke iindlela ezimfutshane ezinazo zingagcinwa nangaliphi na ixesha ndifuna ukulawula ezi ndinokuya kwipaneli yolawulo lwe-ces khetha useto lokuvumelanisa kwaye ungabona okufumanekayo kwimet sync I-Dreamweaver CC ayisiyongqokelela yezixhobo ezibonakalayo njengezixhobo zoyilo lwewebhu kunye nomhleli wekhowudi.
Kubalulekile ukuba ube namava omsebenzisi asemagqabini, ngenxa yoko senze uphuculo masicofe iSplit View ngoku ungabona kwangoko ukuba sihlengahlengise ukuqaqambisa kwethu ukuthelekisa isitayile seDreamweaver esibonakala kuyilo lweCSS. Jonga iinombolo zomgca kunye nokuJongwa kweKhowudi Ucofa amacandelo ahlukeneyo ekhowudi okanye iindawo ezahlukeneyo kwimbonakalo ebonakalayo kwaye uzame ukunqakraza nayiphi na ithegi kwimboniselo yekhowudi, jonga kwithegi yokuvala ndiyathemba ukuba unemincili njengam malunga neempawu ezintsha kwiDreamweaver CC. Hlala ubukele njengoko siceba ukugcina ukukhutshwa rhoqo kohlaziyo ukubonelela ngesixhobo esisebenzayo kunye nesinomdla sokuphucula izixhobo kunye namava omsebenzisi.
Khuphela ingxelo yetyala ye-Dreamweaver CC namhlanje
Ngaba iAdobe isenza iDreamweaver?
Inkqubo ye-kutshanje/uninzi lwenguqulelo yangoku yeDreamweaverNguJanuwari 2021ukukhulula(Inguqulelo21.1). OkuInguquleloukukhupha amanqaku amatsha kwaye kubandakanya ukulungiswa kwe-bug.
Mnumzana okanye Nkosikazi ethandekayo, Wamkelekile kweli nqaku leAdobe Dreamweaver 2021! Kwimizuzu nje eyi-12, uya kufunda yonke into oyifunayo ukuze uyisebenzise ukusuka kwinqanaba labaqalayo! I-Dreamweaver ibingomnye wabahleli bophuculo abathandwayo ukusukela ngo-1997 kwaye iyinxalenye yephakheji yeAdobe Creative Cloud njengenxalenye yobhaliso.
Ilungele nabani na osebenza ngekhowudi yewebhu enjenge-HTML, i-PHP, i-XML, nokunye okuninzi, ngokwazi ukwakha ikhowudi yakho ngokukhawuleza nangokulula ngokujonga kwangaphambili kweziphumo zakho. Kule nqaku, siza kukubonisa iimpawu eziphambili zeDreamweaver, sicinga ukuba unokuqonda okuyisiseko kwe-HTML. Xa uvula iDreamweaver, unokukhetha iindlela ezininzi zokufaka iikhowudi.
Chaza igama leseva, uhlobo lwenkqubo, idilesi ye-FTP okanye ye-IP, kunye nenombolo yezibuko. Emva koko faka igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ukuze uqhagamshele kuGcina kwaye usebenzise. Ungaya kwi-Starter Template ukufumana amaxwebhu asele elungiselelwe ukuqala ngawo, anje ngala: B.
Ungafaka owakho umfanekiso ngokuchaza umendo opheleleyo kwi-src uphawu okanye uqale ukuhlela isihloko kwangoko. Ukubona ukuba uyisebenzisa kanjani iDreamweaver, masiqale nje ngoxwebhu olutsha lwe-HTML. Oku kuyakuboniswa kwimbonakalo yokwahlulahlula, kubonisa zombini imbonakalo ebonakalayo yemifanekiso ephezulu kunye ne-HTML yakho emazantsi.
Ungatshintshela kumbono wekhowudi ukwandisa ikhowudi, okanye ukujonga umbono ukuze ubone kuphela ukubonwa kwangaphambili. Ngoku masibone indlela yokusebenzisa i-Dreamweaver ukwenza i-HTML yakho. Ungazikhowudi ngokwakho okanye usebenzise Faka ipaneli ngasekunene ukongeza iithegi ezininzi ze-HTML ngefomathi egqityiweyo.
Umzekelo, ungafaka nasiphi na isihloko ngesihloko ngokukhetha ifomathi echanekileyo kuluhlu. Le thegi iya kubekwa kanye apho isikhombisi sakho sibekwe khona kwikhowudi kwaye iya kuvela ngexesha lokwenyani kumbono ophambili. Unokwenza ulungelelwaniso lwentloko kunye neepropathi ngokuchwetheza ngokuthe ngqo kukhetho olucetyiswe yi-Dreamweaver, iluncedo kakhulu kuthintelo lweempazamo zeziphumlisi okanye ngokukhawuleza ukufumana iimpawu ezinokusetyenziswa ngalo mzuzu.
Qiniseka ukuba usebenzisa isitshixo seTab ukongeza ii-indent. Yongeza ithegi yomhlathi ukongeza umhlathi wokubhaliweyo okanye iithegi zoluhlu ukubandakanya uluhlu oluyalelweyo okanye olungacwangciswanga, kwaye usebenzise uLuhlu loLuhlu ukongeza izinto. Unokusebenzisa i-CTRL (okanye i-CMD) okanye i-C okanye i-V ukukopa kunye nokuncamathisela imigca yekhowudi.
Unokuhlela kwaye ulawule ezi thegi ngokuthe ngqo kwindawo yokujonga kuqala ngokukhetha ithegi kunye nokutshintsha iimpawu zayo ngokubanzi, o.k.t. B.
Ifomathi yokubhaliweyo, isitayela okanye nayiphi na ikhonkco. Olu tshintsho lukwaphunyezwa kwikhowudi kwaye zihlala zinxulumene nosuku olukhethiweyo. Unokuhlengahlengisa iipropathi zamaqela ethegi kuwo wonke umaki womzimba.
Ukongeza umfanekiso, ungasebenzisa i-tag yomfanekiso kunye nokukhangela umfanekiso. Ikhowudi ingenisa umfanekiso usebenzisa indlela yolawulo lwasekhaya ngobubanzi bayo bokuqala kunye nokuphakama. Kwelinye icala, ukuba ufuna ukongeza umfanekiso kunye neengcaphuno, kufuneka wongeze ithegi yomfanekiso.
Kumzobo ungenisa umfanekiso kunye nethegi yomfanekiso kwaye kwi-figcaption uyongeza inkcazo yawo. Unokongeza nayiphi na itheyibhile usebenzisa ithegi yetafile echaza imiqolo, ububanzi ngokubanzi, isitayile somda, kunye nezihloko. Ikhowudi ye-HTML iveliswa ngokolu khetho kwaye ibonisa i-tr-tag kumqolo ngamnye wetafile kunye ne-td-tag kwikholamu nganye yetafile, o.k.t.
iseli nganye Ngokuzenzekelayo, iseli nganye yetafile iqulethe '& nbsp;', ebonisa indawo engenanto onokuyisusa ukufaka okanye ukufaka enye i-tag ye-HTML. Ngenisa ifomathi yentloko yetafile ngaphakathi kophawu lweScope, kule meko ulungelelwaniso olulula oluphakathi.
Ukongeza ikhonkco, cofa kwi-Hyperlink kwaye uchaze isicatshulwa esiza kusetyenziswa kunye nedilesi yekhonkco. Oku kukuvumela ukuba ungenise naliphi na ikhonkco kwamanye amaxwebhu e-HTML onawo, anje ngala: B. kumaphepha ewebhu asekondari ukukhangela.
Ukujonga ngokupheleleyo uxwebhu lwakho lwe-HTML, yiya kwiFayile, ukujonga kwangaphambili kwexesha-kwaye ukhethe isikhangeli ofuna ukusisebenzisa kubandakanya iFirefox, iChannel, iHlola kunye neEdge. Oku kuluncedo kakhulu ekujongeni ukuba iphepha lakho kunye nezixhumanisi zisebenza ngokufanelekileyo. Ngaphantsi kwepaneli yokufaka, uya kufumana i-tag tag, esetyenziselwa ukudibanisa izinto ezininzi ze-HTML.
Qiniseka nje ukuba ukhetha zonke izinto onomdla kuzo kuqala. Ukuba ufuna uncedo okanye uhlaziya, unokucofa ekunene kwithegi kwaye uye kuXwebhu oluKhawulezayo ngenkcazo elula negqibeleleyo kunye noko ikwenzayo. Ukwenza ikhowudi yakho ibonakale ngakumbi, unokucinezela okanye wandise nasiphi na isiqulatho sethegi usebenzisa iintolo ezisekhohlo; I-Dreamweaver ikwabandakanya iikhowudi ezakhelwe kwangaphambili phantsi kwepaneli yee-Snippets ngasekunene, kubandakanya neekhowudi zokongeza imenyu elula yokuhamba kunye nokunye.
Ngoku makhe sijonge ukuba usenza njani kwaye usilawula njani isitayile sewebhusayithi yakho ngeeNdawo zokuHamba zeSitayile okanye i-CSS. Ukuba usebenza noxwebhu lwe-HTML, khetha nayiphi na into kwimbonakalo yangaphambili kwaye ucofe iqhosha lokudibanisa. Unokwabela nawuphi na umkhethi weCSS kwinto enjalo, nokuba yiklasi okanye isazisi esandulelwe yi-hashtag.
Emva koko yiya kwifayile entsha yeCSS echaza igama kunye nendawo kwindawo yendlela yakho. Le fayile intsha yeCSS iya kubandakanywa kwithegi yentloko kwaye idweliswe kwiphaneli yoMyili weCSS phantsi koovimba, gqibezela uluhlu olupheleleyo lwabakhethi osele ubachazile ukuza kuthi ga ngoku, kule meko i-ID inikwe nje kwithegi ye-div. Ngaphantsi kweePropathi uya kufumana zonke iindlela onokuzisebenzisa kwiCSSselector yangoku.
Xa olu khetho lusetyenzisiwe kwiithegi ezinomxholo wokubhaliweyo, unokukhangela icandelo leZicatshulwa ukuze wenze ngokwezifiso umbala wombhalo, usapho lwefonti, isitayile, ukuhanjiswa, nokunye okuninzi. Esi sitayile sitsha sisetyenzisiwe kuzo zonke iithegi ezinxulumene nesikhethi sangoku se- # div1, kule meko ithegi yonke ye-div1 esinayo. Zonke ezi zinto zintsha zisetyenziswa ngqo kwifayile ye-CSS enxulumene noko.
Khumbula ukugcina amaxwebhu akho rhoqo ukuze ungalahleki. Unokusebenzisa abakhethiweyo beklasi kwi-Dreamweaver ukufaka izitayile zakho zesiko kwiithegi ezininzi ze-HTML. Umzekelo, ungachaza isikhethi esikwi-LeftClass ngqo kwi-CSS ukulungelelanisa iithegi ezininzi kwicala lasekhohlo lephepha le-HTML.
Unokufaka olu khetho lomfundi kwiithegi ngokuthe ngqo kwi-HTML ukuba ukhetha ukufaka iikhowudi. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukufaka ifayile yakho yeCSS, vele ubeke isikhombisi sakho ngaphakathi kwethegi yentloko, cofa ekunene kwaye uye ku-Qhoboshela iSpredishithi. Qiniseka ukuba usebenzisa amagama okhethiweyo e-CSS achazwe kule fayile intsha yeCSS.
Ungaya kwiFayile, kwiiPropathi zePhepha ...
ukuseta iinketho ezahlukeneyo kwiphepha lakho le-HTML liphela, njenge: B. Ifonti yokubhaliweyo, umbala wombhalo kunye nombala ongasemva, uhlobo lwekhowudi, uguqulelo lwe-HTML njalo njalo. Nje ukuba amaxwebhu kunye neefayile zakho zilungile, ungazilayisha okanye uzihlaziye kwi-intanethi kwiseva yakho ekude.
Kwiphaneli 'yeefayile' ufumana iifolda zangaphakathi nazo zonke iifayile kunye namaxwebhu. Ungasebenzisa iqhosha lokuqala apha ngasentla ukunxibelelana neseva ekude okanye idilesi ye-FTP enikezwe ekuqaleni kweli nqaku. Emva koko sebenzisa i-Layisha okanye i-Sync iqhosha ukuze ulayishe kwaye ubhale ngaphezulu amaxwebhu akho kwi-intanethi, okanye ukuvumelanisa iiseva zasekhaya nezikude ukufumana iinguqulelo zamva zezo fayile.
Soloko ujonga impazamo ngokujonga iqhosha lesibini elingezantsi. Nje ukuba ezi fayile zilayishwe kwiserver yakho, ziya kwenziwa zifumaneke kwi-intanethi njengoko unokujonga oku nakwisiphi na isikhangeli. Enkosi ngokujonga esi sikhokelo! Ndwendwela iChannel yethu ye-YouTube izikhokelo ezikhawulezayo nezasimahla kunye nokuphuhlisa izakhono zakho ezintsha!
Ngaba ikhona ingxelo yasimahla yeDreamweaver?
Yenziwe yiMacromedia ngo-1997 kwaye yaphuhliswa ngabo de iMacromedia yafunyanwa nguI-AdobeIinkqubo ngo-2005.I-Adobe Dreamweaver yiyoiyafumaneka kwiinkqubo ezisebenzayo zeMacOS kunye neeWindows.
I-Adobe Dreamweaver20.2 isebenza kwi-MacOS Catalina
Chwetheza Umhleli we-HTML, isixhobo senkqubo, imeko-bume yophuhliso oluhlangeneyo (IDE)
Ngaba i-Dreamweaver isasetyenziswa ngo-2019?
Hayi,Dreamweaverlelona xesha lethu lihlaziyiweyoInguqulelokwaye kuphelaInguqulelo yeDreamweaverUnokuzikhuphelela kwifayile ye-simahlaityala. Ngaba abafundi bayasifumana isaphulelo ukuba bathatha isigqibo sokuthenga emva kwe-simahlaityala?